Imifanekiso ye-Massachusetts Institute of Technology
by UMarisa uBenjamin noKathy Doyle
Ukutyelela I-Photo ye-MIT Campus
Inkundla yaseKillian kunye neGreat Dome kwi-MIT. kunye ne-91 / Flickr / CC BY-SA 2.0
I-Massachusetts Institute of Technology, eyaziwa ngokuba yi-MIT, yiphishi yocwaningo lobucala kwiCambridge, eMassachusetts. Eyasungulwa ngo-1861, i-MIT njengamanje inebafundi abayi-10 000 ababhalisile, ngaphezulu kwesiqingatha sabo kwizinga lokuphumelela. Imibala yayo yesikolo ibomvu ebomvu kunye ne-gray grey, kwaye i-mascot yayo nguTim we-Beaver.
Iyunivesithi ihlelwe kwizikolo ezinhlanu kunye namasebe angaphezu kwe-30: ISikole soBuchule noCwangciso; Isikolo sobunjineli; ISikole soLuntu, UbuGcisa, kunye neNzululwazi zeNtlalo; Isikolo seSayensi; neSchool School of Management.
I-MIT ihlala ibekwe njengenye yezikolo zeteknoloji eziphezulu kwihlabathi kwaye ihlala iqhosha kakhulu phakathi kwezikolo zobunjineli eziphezulu . Abalumni abaziwayo baquka uNowaam Chomsky, uBuzz Aldrin noKofi Annan. I-alumni engaziwayo iquka i-Allen Grove, i-College ye-Admissions ye-Admissions.
Ukubona oko kuthatha ukuba ungene kule yunivesiti ehloniphekileyo, khangela iprofayili ye-MIT kunye nale MIT GPA, SAT kunye ne-ACT graph .
I-MIT kaRay noMaria Stata Centre
I-MIT Stata Centre (nqakraza isithombe ukuze ukhulise). I-Credit Credit: Katie Doyle
Isikhungo sikaRay noMaria Stata eMasisitri Institute of Technology sasivulelwa ukuba sihlale kwindawo yokuhlala ngo-2004, kwaye sele sisisigxina sekampus ngenxa yokuyila kwayo.
Eyilwe ngumqambi owaziwayo uFrank Gehry, iStata Centre ibuye ifake iiofisi zezifundo ezimbini ezibalulekileyo zeMIT: uRon Rivest, umculi we-cryptographer owaziwayo, noNoam Chomsky, ifilosofi kunye neengqondo ze-Psychology abathi iThe New York Times ibiza ngokuthi "uyise wezilimi zanamhlanje." I-Stata Centre ihlala kwiifilosofi kunye namasebe olwimi.
Ngaphandle kwimeko yezidumi ze-Stata Centre, ibuye isebenze ngeendlela ezahlukeneyo zeyunivesithi. I-design eco-friendly yokwakha ifaka izithuba zophando ezihamba phambili ezibandakanya i-Computer Science kunye ne-Laboratory ye-Intelligence Laboratory kunye neLebhu yeeNkcukacha kunye neSigqibo seNkcazo, kunye neeklasi, i-auditorium enkulu, iindawo zengxowankulu ye-hangout, isikhungo sokuzimelela, kunye neendawo zokudlela .
I-Forbes yeCafé yentsapho kwi-MIT
I-Forbes Family Café kwi-MIT (cofa isithombe ukuze ukwandise). I-Credit Credit: Katie Doyle
I-Forbes yeCafé yentsapho ifumaneka kwi-MIT kaRay noMaria Stata Centre. I-coffee-bed, ene-220-seat shelf inikeza ukutya ngexesha leveki, ukuvula ngo-7: 30 ekuseni. Imenyu iquka i-sandwiches, i-salads, isobho, i-pizza, i-pasta, i-entrees eshushu, i-sushi kunye ne-on-go-snacks. Kukho kwakhona i-Starbucks yeKhafi.
I-coffee shop yindlela yokudlela yokuphela kweStata. Ngomgangatho wesine, iR & D Pub inikezela ubhiya, iwayini, iziphuzo ezithambileyo, itiye kunye nekhofi yabafundi, i-faculty nabasebenzi abangama-21 +. Ibha ibuye ibe nemenyu ebhenkcezayo kunye neendleko zokushicilela, kuquka i-nachos, i-quesadillas, i-chips kunye nokudibanisa, kunye nepizz.
I-Stata Lecture Hall kwi-MIT
I-Stata Lecture Hall (nqakraza isithombe ukuze ukhulise). I-Credit Credit: Katie Doyle
Le ngqungquthela yegumbi kumgangatho wokuqala weziko loLwazi kwiziko likaRay neMaria Stata lilodwa leendawo zokufundela kwiStata Centre. Kukho nezinye iiklasi zokufundela ezimbini kunye namagumbi okufundela.
Uninzi lwezibonelelo zokufundisa kwiStata Centre zisetyenziselwa i-MIT ephezulu yeSikolo soBunjineli. Ubunjineli bechmikhali, ubunjineli bamandla kunye nobunjineli benjineli phakathi kweentloko ezidumileyo kwi-MIT.
Isakhiwo seGreen Green
Isakhiwo seGreen kwiMIT (cofa isithombe ukuze ukhulise). I-Credit Credit: UMarisa uBenjamin
I-Green Building, ebizwa ngegama le-Texas Instruments kunye nomsunguli we-Texas Instruments kunye noMIT Alumni Cecil Green, likhaya kwiSebe leMhlaba, i-Atmospheric, ne-Sciences Planetary.
Isakhiwo sakhiwe ngowe-1962 ngumenzi wezakhiwo zomhlaba oyi-IM Pei, ongu-alumni we-MIT. Isakhiwo seGreen sisakhiwo esikhulu kunazo zonke eCambridge.
Ngenxa yobukhulu obubonakalayo kunye noyilo, iWindows Building ijoliswe kwi-pranks ne-hack. Ngo-2011, abafundi be-MIT bafake izibane ze-LED zangasese ezingalawulwa ngomoya kwiifestile zesakhiwo. Abafundi baphendulela iGreen Building ibe ngumdlalo owodwa omkhulu weTetris, owabonakala eBoston.
Inkcazo yeBongo kunye neCognitive Science kwi-MIT
Inkqubo ye-MIT yeBongo kunye neCognitive Sciences Complex (nqakraza isithombe ukuze ukhulise). I-Credit Credit: UMarisa uBenjamin
Ngaphandle kweStata Centre, i-Brain neCognitive Sciences Complex yikomkhulu kwiSebe lezeBongo kunye neCognitive Sciences. Kugqitywe ngo-2005, izakhiwo zengingqi kunye namagumbi okufundisa, kunye nama-laboratories ophando kunye ne-atrium engama-90.
Njengeziko elikhulu kwi-neuroscience kwihlabathi, isakhiwo sinezinto ezininzi ezinobungakanani bemvelo ezifana nezindlu zangasese ezihlaziyiweyo kunye nokulawulwa kwamanzi esiphepho.
I-Complex ikhaya leziko leMartos Imaging Centre, i-McGovern Institute for Brain Research, i-Picower Institute for Learning and Memory, kunye neZiko le-Biological and Computational Learning.
Ukwakhiwa kweKlasi ye-16 kwi-MIT
I-MIT yeklasi (chofoza umfanekiso ukuze ukwandise). I-Credit Credit: Katie Doyle
Eli gumbi lokufundela lisesakhiwo seDorrance, okanye isakhiwo se-16, njengoko izakhiwo ze-MIT zibizwa ngokuqhelekileyo ngamagama azo. Ukwakha ii-ofisi zezindlu ezili-16, iiklasi kunye neendawo zokusebenzela zabafundi, kunye ne-plaza yangaphandle yelanga kunye nemibhobho. Ukwakhiwa kwe-16 kuye kwajoliswa ku-MIT "hack", okanye i-pranks.
Eli gumbi lifundela abafundi abangama-70. Ubungakanani besayizi yobukhulu beklasi kwi-MIT ludinga ukuhamba malunga nabafundi abangama-30, ngelixa ezinye iiklasi zeeminar ziya kuba zincinci kakhulu, kunye nezinye iindidi ezinkulu, iintetho zokuqala ziya kuba neqela labafundi abangama-200.
I-Library yeHayden Memorial Library eMIT
I-Library yeHayden Memorial Library kwi-MIT (nqakraza isithombe ukuze ukhulise). I-Credit Credit: UMarisa uBenjamin
I-Charles Hayden Memorial Library, eyakhiwe ngo-1950, yilayibrari yesintu kunye nenzululwazi yeSikolo soBuntu, ubuGcisa kunye neSayensi yeNtlalo. Efumaneka ecaleni kweNkundla yeKillian kwiSikhumbuzo seDisemba, iindawo zokuqokelela iilayibrari ukusuka kwi-anthropology kwizifundo zabafazi.
Umgangatho wesibini uhlala enye yezona zinto ziqokelele kakhulu kwiincwadi kwihlabathi kwiingcali zesayensi, iteknoloji kunye neyeza.
Maclaurin Izakhiwo kwi-MIT
Izakhiwo zaseMaclaurin kwi-MIT (cofa isithombe ukuze ukhulise). I-Credit Credit: UMarisa uBenjamin
Izakhiwo ezungeze iNkundla yaseKillian yizo zakhiwo zaseMaclaurin, ezibizwa ngokuba zihloniphe umongameli wangaphambili we-MIT uRichard Maclaurin. Ubunzima bubandakanya amaZakhiwo 3, 4, kunye no-10. Ngefom yefom, i-network ye-halls ebanzi inika abafundi kunye nokukhuseleka kwezakhono kwiimeko zebusika zaseCambridge.
ISebe leeNjineli zoMatshini, i-Admitted Graduate Admissions, kunye ne-Ofisi kaMongameli ziseKwakheni 3. Ukwakhiwa kwezindlu ezi-4 Izakhiwo zoMculo kunye ne-Theatre, iZiko leNkonzo kaRhulumente kunye ne-International Film Club.
I-Great Dome, enye yezona ziqwenga ze-architecture kwi-MIT, ihlala kwi-Building 10. I-Great Dome ibheke iNkundla yaseKillian, apho kuqaliswa khona ngonyaka. Isakhiwo se-10 sisekhaya kwi-Admissions Office, i-Library ye-Barker kunye ne-Ofisi yeKhansela.
Ukujonga kuMfula waseCharles uvela eMIT
Umfula waseCharles (nqakraza isithombe ukuze ukhulise). I-Credit Credit: UMarisa uBenjamin
Umlambo waseCharles uhamba ngokuthe ngqo kwi-MIT campus. Umlambo, osebenza njengomda phakathi kweCambridge neBoston, usekhaya leqela labasebenzi be-MIT.
I-Harold W. Pierce i-boathouse yakhiwa ngo-1966 kwaye ibonwa njengenye yezona zintle zengqungquthela zezemidlalo kwi-campus. I-boathouse ifaka i-tank yokuthambisa amanzi ngaphakathi. Esi sikhungo sinama-ergometers angama-64 kunye neekhekhsi ezingama-50 kwizinto eziphakamileyo, ezine, iimbini kunye neziqulatho kwiinqanawa ezine.
INtloko yeCharles Regatta yinkqubo yokugubha iminyaka emibili eyenzekayo ngo-Oktobha. Umzabalazo uletha ezinye zeendlela ezihamba phambili kwihlabathi jikelele. Ithimba labasebenzi be-MIT bathathe inxaxheba kwiNtloko kaCharles.
IHolo leMaseeh kwi-MIT
I-Maseeh Hall kwi-MIT (cofa isithombe ukuze ukhulise). I-Credit Credit: Katie Doyle
IHolo laseMaseeh, kwi-305 Memorial Drive, lijongene noMfula oyiCharles. Ngaphambili ebizwa ngokuba yiAshdown House, iholo yavulwa kwakhona ngonyaka ka-2011 emva kokulungiswa okubanzi kunye nokuphuculwa. Indawo yokuhlala ngokubambisana ihlala kwiingcali ezingama-462. Izinketho zegumbi ziquka ii-single, eziphindwe kabini kunye nohambo; Izihlandlo zihlala zigcinwe kubafundi abakhulu nabadala. Zonke iindawo zokuhlambela zabiwe, kwaye izilwanyana azivumelekanga - ngaphandle kweentlanzi.
IHolo leMaseeh libandakanya iholo le-MIT elikhulu lokudlela egumbini lokuqala, iHoward yokutya iHolo. Igumbi lokudlela linika izidlo ezili-19 ngeveki, kuquka i-kosher, i-kosher, i-vegan ne-gluten-free options.
I-Kresge Auditorium kwi-MIT
I-Kresge Auditorium kwi-MIT (cofa isithombe ukuze ukwandise). I-Credit Credit: Katie Doyle
Eyilwe ngumbonakaliso wase-Finnish-waseMelika u-Eero Saarinen njengenzame yokuqokelela umzi womfundi we-MIT, iKresge Auditorium kaninzi ibamba amakhonsathi, iintetho, imidlalo, iinkomfa kunye nezinye iziganeko.
Iholo lekhonsathi yalo ephakamileyo lihlala kwizibukeli ezili-1,226, kunye nendawo encinci yezemidlalo, ebizwa ngokuba yiKresge Little Theatre, ihleli kwezi-204.
I-Kresge Auditorium iquka ii-ofisi, ii-lounges, amagumbi okuhlaziya kunye namagumbi okugqoka. Ukubonga kwayo ngokubonakalayo, okubonisa udonga ngokupheleleyo olwakhiwe ngeefestile, lunokugcinwa ngokwahlukileyo kwiinkomfa nakwiindibano.
I-MIT kaHenry G. Stenbreinner '27 Stadium
I-MIT Stadium (nqakraza isithombe ukuze ukhulise). I-Credit Credit: Katie Doyle
Efumaneka kufuphi neKresge Auditorium kunye neSikhungo se-Stratton Student, uHenry G. Steinbrenner '27 Stadium yindawo ephambili yebhola lebhola le-MIT, ibhola lebhola, i-lacrosse kunye neengoma kunye neengqela zesebe.
Intsimi eyintloko, uRobert Field, ifumaneka ngaphakathi kwimizila kunye neenkalo zendawo yokudlala eyenziwe kutshanje.
Le midlalo isebenza njengephambili yeprogram yezemidlalo ye-MIT, kuba ijikelezwe yiCarr Indoor Tennis Facility; I-Johnson Athletics Centre, enezindlu ze-ice rink; Iziko leZesiger leZiko leZempilo, elinikezela ngezibonelelo zokufunda, ukuqeqeshwa kobuqu kunye neeklasi zeqela; i-Rockwell Cage, eyindawo yokubhalela ibhola yebholabhuyuni kunye namaqela e-volleyball; kunye namanye amaziko okuqeqesha kunye neendawo zokuzivocavoca.
Isikhungo seStratton yabafundi kwi-MIT
I-Stratton Student Centre kwi-MIT (nqakraza isithombe ukuze ukhulise). I-Credit Credit: UMarisa uBenjamin
I-Stratton Student Centre yiyona ndawo yeyona nto eyenziwa ngabasebenzi abaninzi kwi-campus. Isiko sakhiwa ngo-1965 kwaye sabizwa ngozuko lomongameli we-11 we-MIT, uJulius Stratton. Iziko livulekile iiyure ezingama-24 ngosuku.
Ininzi iiklabhu kunye nemibutho yabafundi isekelwe kwiStatton Student Centre. I-Ofisi ye-MIT Card, i-Ofisi yeMisebenzi yabafundi, kunye neZiko leNkonzo Zoluntu zimbalwa nje kwimibutho yolawulo ephakathi. Kukho neendawo ezininzi ezithengisayo zokuthengisa kubafundi ababonelela ngeenwele, ucoceko olomileyo kunye neemfuno zebhanki. Iziko libonelela ngeendlela ezahlukeneyo zokutya, kuquka uTaqueria uAna, iCambridge Grill, kunye neNqanawa.
Ukongezelela, iSikole sabafundi baseStratton sinendawo yokufunda yoluntu. Ngomgangatho wesibini, iStatton Lounge, okanye "Isikhumulo sezindiza", uhlala kwiilali, iidesksi kunye neeTV. Igumbi lokuFunda, kumgangatho wesithathu, ngokuqhelekileyo isithuba sokufunda esincinci.
Isitatimende se-Alchemist kwi-MIT
Isitatimende se-Alchemist kwi-MIT (cofa isithombe ukuze ukwandise). I-Credit Credit: UMarisa uBenjamin
"I-Alchemist," ephakathi kweMassachusetts Avenue kunye neStatton Student Centre, ibonakaliso eliphawulekayo kwi-campus ye-MIT kwaye yanikwa umyalelo wokuba i-150 ikhunjulwe esikolweni. Eyenziwe ngumdwebi uJaume Plensa, umfanekiso ubonisa amanani neempawu zeemathematika ngendlela yomntu.
Umsebenzi kaPlensa ukuzinikezela ngokucacileyo kubaphandi abaninzi, izazinzulu kunye nezibalo eziye zafunda kwi-MIT. Ebusuku, umzobo uphawulwe ngamacwecwe ahlukeneyo, ukhanyisa amanani kunye neempawu.
Isakhiwo seRogers kwi-MIT
Isakhiwo se-Rogers kwi-MIT (cofa isithombe ukuze ukwandise). I-Credit Credit: Katie Doyle
Ukwakhiwa kwe-Rogers, okanye "isakhiwo se-7," kwi-77 Massachusetts Avenue, yinto ephakamileyo kakhulu ye-MIT campus. Emile ngqo kwiMassachusetts Avenue, i-staircase yayo ehamba ngeemabula ayikho nje kuphela kwiCorrid Corridor eyaziwayo, kodwa kwii-laboratories ezininzi, iiofisi, amasebe ezemfundo, i-University of Visitor Centre kunye ne-Rotch Library, i-MIT yolondolozo kunye nelayibrari yokucwangcisa.
Isakhiwo seRogers siquka iSeram Café, indawo yokutya yokuthengisa, kwakunye neCafé yaseBosworth, elinePeet's Coffee, iziphuzo ezikhethekileyo ze-espresso, kunye nama-dessert kunye nee-dessert ezithatyathwa yiebhaki ezidumileyo zaseBoston.
I-MIT ibiza iCafé yaseCosworth "yintliziyo yokuphuza i-coffee drinker ... ukuba ingaphuthelwa." Yimihla evulekileyo yeveki ukususela ngo-7: 30 ukuya ku-5: 00 ntambama
Umjelo we-Infinite kwi-MIT
I-Corridor yase-Infinite e-MIT (nqakraza ifoto ukuze ukwandise). I-Credit Credit: Katie Doyle
I-MIT ebizwa ngokuba yi "Corridor yase-Infinite" idlula .16 amamayela kwiZakhiwo 7, 30, 10, 4 no-8, ezidibanisa izakhiwo ezahlukeneyo kunye nokuqhagamshelana nentshona kunye nempuma ye-campus.
Iindonga ze-Infinite zeKorrid zidibaniswe neefowuni ezikhangisa amaqela abafundi, imisebenzi kunye neziganeko. Ii-laboratories eziliqela zisekelwe kwiCorrid Corridor, kwaye iifestile kunye neengcango zabo zeplastiki zisezantsi-toil zibonisa ngophando olumangalisayo olwenzeka kwi-MIT imihla ngemihla.
I-Corridor yase-Infinite nayo ingummkeli wenkcubeko yeMIT edibeneyo, iMITHENGI. Iintsuku eziliqela ngonyaka, ngokuqhelekileyo ekuqaleni kukaJanuwari kunye nokuphela kukaNovemba, ilanga lilungelelanise ngokugqithiseleyo kunye neKorrid Infinite, ekhanyisa ubude balo begumbi kunye nokudweba isihlwele sabafundi kunye nobuchule obufanayo.
I-Galaxy Sculpture eKendall Square
I-Galaxy Sculpture eKendall Square (cofa isithombe ukuze ukhulise). I-Credit Credit: Katie Doyle
Ukususela ngo-1989, i-Galaxy: umfanekiso we-Earth Sphere, nguJoe Davis, uMaspala we-Massachusetts Institute of Technology-umculi kunye nomphandi ohlangeneyo, uye wabingelela abaseBosonia ngaphandle kwesiteshi se-Kendall Square.
I-Kendall ishiye isinika ukufikelela okuthe ngqo kwintliziyo ye-MIT campus, kunye nommandla othakazelisayo waseKendall Square, ohlala kwiindawo ezininzi zokutyela, iifestile, imivalo, iivenkile, iCinema yeCatema, kunye ne-bookstore ye-MIT.
I-MIT ye-Alpha ye-Epsilon Pi e-Back Bay eBoston
I-MIT ye-Alpha Epsilon Pi (nqakraza isithombe ukuze ukhulise). I-Credit Credit: UMarisa uBenjamin
Nangona i-MIT campus ikhona kwiCambridge, ubuninzi bezikolo ezihlaselayo kunye namaqabane asekelwe eBowston's Back Bay. Kuphela ngaphesheya kweHarley Bridge, amaninzi amaninzi afana no-Alpha Epsilon Pi, aboniswe apha, iTheta Xi, i-Phi Delta Theta kunye ne-Lambda Chi Alpha, ifumaneka kwi-Bay State Road, ekwayingxenye ye-campus yase-Boston University.
Ngo-1958, i-Lambda Chi Alpha ilinganisa ubude beHarley Bridge kwixesha lomzimba wobungqina buka-Oliver Smoot, ojikeleze "364.4 I-Smoots + enye indlebe." Unyaka ngamnye iWalda Chi Alpha igcina amanqaku kwibhuloho, kwaye namhlanje iHarvard Bridge iyaziwa ngokuba yiSmoot Bridge.
Hlola ezinye iikholeji zendawo zeBoston
I-Boston neCambridge zihlala kwezinye izikolo ezininzi. Kumntla we-MIT yiYunivesithi yaseHarvard , kunye noMlambo waseCharles eBoston uya kufumana iYunivesithi yaseBoston , iKholeji yase-Emerson , ne- Northeastern University . Kwakhona kwinqanaba eliqhelekileyo le-campus yiYunivesithi yeBrandis, iYunivesithi yaseTufts kunye neWelsley College . Ngoxa i-MIT ingaba nabafundi abangaphantsi kwama-10 000, kukho abafundi abangaba ngu-400 000 ngaphakathi kweekhilomitha ezimbalwa ze-campus.
I-California State University yaseDominguez Hills I-Tour Photo
UThomas Edison: IQela leNamandla ahlaziyiweyo
IziFundo zeeSikethi zabaFundi izimpendulo ezibhalwayo ukuba ziphathe ngendlela engafanelekanga
I-Article kwi-1911 Encyclopedia: Imbali yaseAlexandriya
Ukudibanisa amatende kunye neeMonsters kunye namaGhost
I-Basics of Transit Finance